Fanadihadiana Tranga · Febroary, 2012 · Global Voices teny Malagasy
Fanadihadiana Tranga · Febroary, 2012
Tantara mikasika ny Fanadihadiana Tranga tamin'ny Febroary, 2012
Digital Divide Data: Manampy Hananganana Harena Ara-olona Avy Amin'ireo Fiarahamonina Niangaran'ny Vintana
Mediam-bahoaka 23 Febroary 2012
Niainga tamin'ny fahitàna ny fahombiazan'ny fanapariahana ny IT tao India, dia niara-nanangana ny Digital Divide Data i Jeremy tamin'ny fametrahana ny hetsika Data Entry tao Kambodza tamin'ny 2001, nifantohana tamin'ireo tanora avy amin'ny rantsana faran'izay mahantra sy tsy nisy mpijery teo amin'ny fiarahamonina. Ny DDD dia nanome fahafahana ho an'ireo kamboty, tantsaha mpifindra monina, ary ireo manan-kilema sy noho izay no mahasamihafa azy amin'ireo tranom-pandraharahàna hafa rehetra.
Afrika Mainty 23 Febroary 2012
Mediam-bahoaka 10 Febroary 2012
Iray amin'ireo firenena an-dalam-pandrosoana izay miafara any anatin'ny tontolon'ny media noho antony ratsy i Somalia: ady sivily, kere, haintany, ireo piraty Somaliana raha tsy hanonona afatsy vitsivitsy. Miaraka amin'ny fanampiana entin'ny sehatra fifanakalozana mipetraka ao amin'ny Ushahidi "Somalia Speaks", manangona feo tsy misy mpihaino avy ao Somalia ny Al Jazeera amin'ny teny Anglisy amin'ny alàlan'ny SMS. Avadika ho amin'ny teny Anglisy ireo valinteny ary amin'ny farany dia raketina anaty sarintany.
Dika 06 Febroary 2012
Ny Mpanao Asa Soa Okrainiana tsy miankina, Elena Pinchuk ANTIAIDS foundation miara-miasa amin'ny Biraon'ny Google Okrainiana dia namorona tolotra sosialy vaovao maps.antiaids.org. Izany tolotra vaovao izany dia hanampy ireo Okrainiana mpampiasa aterineto hahita amin'ny fomba tsotra sady haingana ireo toerana fitiliana VIH any amin'ny faritra misy azy, ary koa ireo toeram-pivarotana fimailo.